သင်သတိမပြုမိသည့်အရာတစ်ခုမှာဘီယာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ရထားအားဖြင့်လမ်းကြောင်း အများအပြားတွင်တွေ့နိုင်ပါသည် မီးရထားဘူတာ. အဆိုပါရှက်ဖီးကိုအသာပုတ် အကောင်းဆုံးကိုတစျဦးဖွစျသညျ, အကြောင်းကို featuring 30 စည်နှင့်မူကြမ်း - ပြည်တွင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထင်ရှားတဲ့ဘီယာကနေရွေးချယ်မီးမောင်းထိုးပြအချို့သောအရာ၏. သင့်အနေဖြင့်ရထားပေါ်တွင် get အချို့တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုသွားပါ ... ဒါမှမဟုတ်ပဲသူတို့ကိုနမူနာကောအချိန်ပိုမိုထားဖြုန်းနေဖို့နိုင်. ဘယ်လိုအေးမြ?!
ရထားဘူတာက 10 မှမိနစ်လမ်းလျှောက် ကဖီး, ဒါကြောင့်ကပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာမရှိဖြစ်ပါတယ် ရထားအားဖြင့်ဘီယာလမ်းကြောင်း – ဥရောပအကောင်းဆုံးဘီယာ.
ထူထောင်မှုသည်လက်ရှိတွင်ကပိုင်ဆိုင်သည် ဆမ်မစ်ဟောငျး Brewery. သူတို့ရဲ့အရက်ဆိုင်တစ်သွားလာရင်းမှအဆင်းလှသောအဆောက်အဦများအတွက်များမှာ, ရိုးရာ ales, နှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောအတွင်းပိုင်း. အဘယ်သူမျှမကြီးတွေအမှတ်တံဆိပ်ရှိပါတယ်, Tadcaster အတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘီယာကနေဖွင့်တောက်ပဟာယပူဇော်သက္ကာ, Yorkshire.
အဆိုပါဘီယာကတည်းကခေတ်မီထားပြီးသော်လည်း 1993, ကျန်ကြွင်းသောအိုမင်းမြေအောက်ခန်း၏မိုင် မွေအောကျ အဆိုပါခရီးစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. မြေအောက်ရေလှိုင်းများသည်ပွင့်လင်းသောသစ်သားကစော်ဖောက်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ထားသော Pilsner Urquell ကိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောသစ်သားစည်ကြီးများနှင့်အဆုံးသတ်ထားသည်။.
ငါတို့သည်သင်တို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုအပေါ်ထဲမှာပါစေနိုင်သလား? ဂျာမနီမှာအကောင်းဆုံးဘီယာဖြစ်ပါသည် မဟုတ် တွင် မြူးနစ်. ဂျာမဏီခြွင်းချက်ဘီယာတစ်ဦးကြီးမားသောအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. နေ့စဉ်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်အံ့သြလောက်အောင်ကောင်းသောများမှာတိုင်းပြည်တောင်မှအများကြီး. သို့သော်မရတိုင်းဘီယာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ပါတယ်, ပင်ဘီယာဒဏ္isာရီရှိရာပြည်၌. သငျသညျအမြိုးမြိုးကိုရှာနေနေတယ်ဆိုရင် သငျတို့သဇာတ်ကောင်များနှင့် sizzle နှင့်သင်၏ဘီယာကြိုက်တယ်, ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာမ တစ်ခရီးကိုစီစဉ် Bavarian backcountry ရန်, ဘီယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်သည်အဘယ်မှာရှိ ဒေသခံယဉ်ကျေးမှု နှင့်ပြောပြရန်ပုံပြင်များနှင့်အတူစစ်မှန်သောလူများကပြသနာတွေဖြစ်ပါတယ်.
ခုနစ်ဆသေးငယ်တဲ့အလယ်အလတ်အရွယ်အစားဘီယာ Bavaria ၏ဤအပိုငျးတှငျအလည်ပတ်. သူတို့ထဲကတချို့ကပြန် 1400 မှယနေ့အထိ. တကျိပ်တပါးသောသူတို့ကိုဖြစ်စေခဲ့ကြ တည်ထောင်ခြင်းအားဖြင့်အသင်းတော်, ကကီးေက်ာင္း, သို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်ယ. သုံးနေဆဲဂျာမန် Baron အားဖြင့် operated နှင့်တစ်ကမ်ဘာပျေါမှာအသက်အကြီးဆုံး Abbey ဘီယာဖြစ်ပါတယ်နေကြတယ်. အနိမ့် Bavaria တစ်ဦးက hidden စည်းစိမ်ရှိ၏ အခါဘီယာမှကြွလာ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-beers-route-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)